Kanjani ukuthola i-visa e-UAE wedwa. UAE visa isikhungo eRussia: ikheli, i-visa
izivakashi Russian, kanye nezakhamizi zakwamanye amazwe CIS ngaphambi kokuvakashela United Arab Emirates UAE kufanele uvakashele isicelo isikhungo visa ukuze uthole imvume yokungena kuleli zwe. Phakathi izici ukulungiswa kwale dokhumenti kuyafaneleka le olunezinyanga eziyisithupha reserve iphasipoti, okuyinto yabalwa kusukela ekupheleni ezweni uhambo, kanye nokwenzeka ukuthola imibhalo elektroniki. Zithanda noma zingathandi, intuthuko kanye zesayensi kanye lobuchwepheshe kuze kube ubhekwa esinye sezenzakalo ezivelele ayisihluthulelo kwezokuvakasha UAE.
Kuyaphawuleka ukuthi abantu abahambayo ngokusebenzisa United Arab Emirates zokuthutha umphakathi ungakwazi ukuhlela ngalezi zinhloso visa zokuthutha umphakathi kuze kuphele amahora 96 e sezindiza yezwe ngalinye, kungakhathaliseki noma yimaphi amasevisi izinkampani basebenzisa ukuthi.
Ukuze wenze iphemithi, okokuqala udinga ukuthi uvakashele isikhungo visa isicelo kanye UAE ukuletha imiqulu elandelayo:
ikhophi umbala ipasipoti;
format umbala izithombe 4,3h5,5 cm;
ngokugcwele lesibawo elizalisiweko.
Uma uhlose ukuhamba nezingane zabo, ngakho-ke isidingo sokwenza imibhalo futhi ikhophi incwadi zokuzalwa. Uma travel ozimele ngizakuzisa kwabesilisa nakwabesifazane, okuyinto kule ncwadi for holiday yakho Ihhotela Star 2-3 ke ejensi zizodinga ukuba lifake inani okuyinto $ 1,500. Le mali ebuyiselwa umnikazi uma kwenzeka ukuthi ushiya izwe ngendlela esifike ngesikhathi.
Qiniseka ukuba banake yokuthi ukuhanjiswa imibhalo akuvunyelwe ukusebenzisa amakhophi ipasipoti izithombe, njengoba aso njengebhere ikhophi yale dokhumenti kuyodingeka kuthunyelwe amafayela ehlukile enegama igama negama izivakashi ngesiNgisi nge date ukufika ku ezweni. Konke lokhu imibhalo angadluliselwa izivakashi zalo opharetha ku-elethronikhi noma uthumele ie-mail.
Indinganiso izivakashi visa ngenyanga ezimweni eziningi, iyiphi oyithandayo visa isikhungo UAE silungiselela kwemalanga ekusebenta lasihlanu. Uma izingane afakwe ipasipoti, kuleso simo sizokwazi ukukhipha imvume mahhala, futhi khona idokhumenti wengane siqu kuso kakade unayo i-visa njengomuntu omdala, ngokulandelana, ukukhokha ngokwehlukile. Kuyaphawuleka ukuthi uma akhiphe isinqumo esikhungweni visa isicelo e Dubai noma-United Arab Emirates, Abu Dhabi, ungaba ngisho amaningi entry visa, futhi lokho isikhathi ivela elilodwa kuya ezinyangeni ezintathu.
Ukubhaliswa ngokuvumela imibhalo Kwenziwa isevisi wezifiki, futhi zikhishwa izivakashi phezu befika endaweni ngesimo original noma ikhophi. Izindleko visa e-UAE kuyinto $ 60. Ngaphambi fly, futhi izivakashi kufanele ngempela ukuthola isiqinisekiso ebhalwe phansi izandla zakho, okuyinto ekhishwe aphethe ihhotela noma tour operator.
Izici ukuthi kudingeka kucatshangelwe
Naphezu kweqiniso lokuthi akukho olusemthethweni ubudala noma ucansi imikhawulo lapha, UAE Visa Centre ungenqaba ukukhipha i-visa kwabesilisa nakwabesifazane abaneminyaka engaphansi 30 futhi abesifazane walonyaka uma zifika kuleli zwe nabayeni bawo, kodwa ayinayo nabo igama elifanayo. Indlela ukungena futhi balishiye leli zwe-visa yokuba izivakashi kuphela ngokusebenzisa sezindiza ethile. Futhi uzinake Kuyaphawuleka ukuthi i-visa ayikwazi ikhishelwa abanikazi passport Israeli.
Visa for United Arab Emirates kuphela kwenziwa kanye kanye njalo Kudingeka ukhiphe ifomu elisha nge ukungena ngamunye okwalandela.
Esikhundleni standard futhi ijwayelekile eziningi Isitika e passport kumuntu ngamunye wakhipha ifayela obukhethekile inombolo ye-ID, kanye nalo lonke ulwazi oludingekayo entry lilondolozwe format electronic kuphela. Inombolo kuziwa i-imeyili yakho, ngemva kwalokho uzodinga ukuphrinta ekhasini elingu-A4 uthathe ukuvakashela izwe.
izinhlobo efanayo visa ekhishwe ezimbalwa:
Guest - inikeza ithuba uhlale ezweni kufikela kuzinsuku ezingu-90. ukugunyazwa okunjalo uyakuba ngezigaba ezimbili: okokuqala, umfakisicelo kufanele uhambise iphakethe okuphelele imibhalo, okungaqinisekisa ukuthi inhloso yohambo leso sikhathi. Ukuze uthole i-visa e-UAE lungenzeka mathupha noma umane athumele esemthethweni e-mail i-visa isikhungo. Ngemva kwalokho, chaza isimo sakho, buyela amakhophi amadokhumende futhi sivumela idatha zokuxhumana contact. Okulandelayo uzodinga ulinde isiqinisekiso noma ukungamukeleki Migration Izikhungo. Uma isicelo sivunyiwe, khona-ke sizodinga ukuletha lonke iphakethe kwemibhalo edingekayo.
Tour - inikeza ithuba uhlale ezweni izinsuku ezingu-30 ngaphandle kokuba nokwenzeka isandiso olwengeziwe. Omkhulu izivakashi abafuna ukuza nabangane uvakashele uhambo kuya Emirates, kanye ukuhlangana nezihlobo noma abangane babo. Sokubhalisela imvume enjalo, kufanele uqale ukukhokha imali i-visa, kanye ukukhokha ikhomishana isikhungo visa, kusukela okwenzeka visa e-UAE. Kulokhu, lemali ikhomishini itawuba ngqo incike inkampani oyikhethile, kanye ukuphuthuma kanye nokugcizelela izidingo ngabanye kumadokhumenti. Njengoba umxhasi for uhambo, ungakhetha ehhotela, yezindiza noma inkampani yokulungisela abahambayo.
Okusetshenziswayo - esikhishwe ezingu-14. Inketho engcono nganoma yisiphi uhambo ibhizinisi noma abantu beqhuba ibhizinisi. Ngokuvamile kwenziwa ngenxa yokuthengisa abaphathi, abameleli inkampani nabanye ochwepheshe.
Ngesikhathi isimemo - kufikela kuzinsuku ezingu-30 yokuba e-United Arab Emirates, nge extension ngokwengeziwe. Ngokuvamile izimvume enjalo eyakhishwa ukuvakashela izihlobo, kodwa ukulithola, nawe nakanjani kudingeka ube umxhasi ngesimo esiseduze.
Transit - ukhishelwe 4 nobusuku obungamashumi uhlale. Ngaphezu isidingo Ukufakelwa esikhumulweni sezindiza, ungahlela lale ivisa imihlangano yebhizinisi iDemo. Ukuze sithole ama-visa esinjalo impela nje ukukhokhela isevisi kanye nemali ezimela, kodwa isebenza kuphela esikhumulweni sezindiza.
Cruise - senziwa abantu abavakashela uhambo kuya Emirates ku liner. Ukwenza i-visa enjalo wenziwa ngokuhamba ukuhamba kunoma Cruises ukuthi uzodinga itshalwe nezimbobo eziningana. Kungaba eyodwa noma amaningi futhi ezimise izinsuku 10-15.
Ohlala - senziwa ukuthi kungenzeka ukuhlala kuleli zwe iminyaka emithathu. Ukuze bathole leyo mvume kumuntu kumele kube impahla ethile noma indawo esemthethweni umsebenzi kwezinye izinkampani zendawo. Isicelo Ukukhishwa leli phepha ukuze bangabhekani okufanele umkhonze umqashi kuphela, futhi uma umuntu ushiya UAE izinyanga ezingaphezu kweziyisithupha, visa ikhanseliwe ngokuphelele.
Noma yimuphi izinhlobo visa zikhishwa esikhathini esiyizinsuku ezingu 59 kusukela ngesikhathi wamupha UAE visa isikhungo. Petersburg, eMoscow nakwamanye amadolobha amakhulu babe izikhungo eziningana lapho kugunyazwa kungenziwa ikhishwe, bese isebenze isikhathi esithile (kuye ngokuthi hlobo). Kungenxa yalesi sizathu ukuthi udinga ukubhekana yokubhalisa visa kuka izinyanga ezimbili ngaphambi kosuku Ukuhamba yakho.
Ubufakazi nokusimama kwezimali
kuyodingeka uthole imvume ukuqinisekisa isimo sabo sezimali kuyinto isihambi esebenzayo noma uthole isimemo.
abahambi Active abhekwa abantu phezu Kule minyaka emihlanu edlule baye bavakashela Schengen amazwe, eNgilandi, e-Australia, e-USA kanye nezinye eziningana. Ukuqinisekisa lokhu, kwanele ukuba athumele ikhophi yephasiphothi yakho, kanye ikhasi ohlwini visa kwelinye lala mazwe. Uma uya elinye izwe abanye, kodwa wavakashela kubo okungenani kabili kule minyaka emihlanu edlule, kufanele futhi kube isikhathi ukukubuyisela imvume, kodwa kusadingeka ukuqinisekisa imali engenayo emikhayeni kule minyaka emibili edlule.
I ukusebenza kwezimali Visa Isicelo Centre kunqunywa nomholo wonyaka ruble ezingaphezu kuka-400 000, kodwa ukuqinisekisa enjalo engenayo isidingo balethe isitifiketi ku Ifomu 2-PIT, okufanele kube ngaphansi ngemva kwezinyanga eziyisithupha. Kungenzeka futhi ukuba balethe isitifiketi ebhange noma esitifiketini sokuqashwa.
Ukuze ukukhipha imvume ingane, ngaphezu uzodinga ukuhambisa lezi zincwadi ezilandelayo:
imvume yokuya kubazali babo, uma bengenayo ahambe.
Uma ingane bhalisiwe e passport abazali futhi ngaleyo ndlela anamatheliswe isithombe sakhe, ngakho-ke uhambo hhayi ndawonye kuphela badinga ukuba amphuzise bese uthumela i-passport ehlukile, kodwa futhi ekhululiwe ngokugcwele imali.
Ukwenza ngokusebenzisa Dubai Centre
Abantu abaningi bakhetha ukusebenzisa amasevisi Emirates inkampani kazwelonke ukuze isicelo visa e-United Arab Emirates. Dubai has isikhungo yayo e Moscow, okuyinto elikhuthaza kuphela amaklayenti inkampani kanye ngesikhathi esifanayo inikeza eziningi izinzuzo kwezivakashi.
Ngaphambi kokuthumela imibhalo enkabeni visa, kutuswa ukuba uqinisekise ukuthi idatha komfakisicelo ukuwugcina ngokuphelele, okuyinto omunye nenqubo elandelayo:
ofaka isicelo visa noma ukuvakashela mazwe alandelayo phezu Kule minyaka emihlanu edlule: England, eU.SA, amazwe Schengen, Canada, eJapane, eNew Zealand,
umfakisicelo ungahambisa isitifiketi esibeka ukuthi ngonyaka odlule imali yakhe zaba ama-ruble ayizigidi 400, noma umholo wakhe ngenyanga kulezi zinyanga eziyisithupha ezidlule kwaba ruble ezingaphezu kuka-33 000.
Kanye izicelo omdala, izingane kumele afinyelele izimfuneko ezithile visa. Uma umuntu alihambisani okungenani eyodwa yalezi zindlela, amaphepha, unqamula enkabeni visa isicelo kubo singatholakali futhi ngenxa yalokho, ngakho-ke abakwazi ukuya Emirates. Dubai, namanye amadolobha amakhulu, ne izikhungo visa eRussia, abeke phambili imithetho efanayo kuwo wonke umuntu.
Ngemva yokubhaliswa Ukukhishwa visa ukugunyazwa Kwenziwa izinsuku ezingu-30, ngesikhathi esifanayo kukhona okuthiwa ephasishi ukungena, esesikhundleni esiyizinsuku ezingu 58 kusukela osukwini lokukhishwa kwaso kwale dokhumenti kuwe. Njengoba esiphuthumayo tingentiwa lapha visa e-UAE , izizathu ezifanele.
ikheli isikhungo: Moscow, Umbala Blvd., 2, esitezi sokuqala; Petersburg, saseNevsky Prospect, 55, esitezi sesibili.
Ukwenza nge Abu Dhabi Centre
Uma unquma ukuya ukusebenzisa Etihad Airways, ukube bekunjalo, ungavakashela isikhungo visa isicelo, esemgwaqweni eMoscow. Ngaphezu iphakethe ejwayelekile kwemibhalo abafundi, abafundi eneminyaka engaphansi kwengu-21, kanye izakhamuzi esezikhulile engaphezu kwengu-60 ubudala Kuphoqelekile kuyodingeka uthumele incwadi uxhaso nasezihlotsheni uxhasa, kanye amaphepha ahlukahlukene ezifakazela ukuthi ubuhlobo bakho (wonke amadokhumenti kumelwe ihunyushwe ngokugcwele isiZulu ).
Kube Kwenziwa visa e-UAE oluyohlala, futhi le mvume ivumela ukuba uhlale ezweni ezinsukwini ezingu-30, kungenzeka isandiso lokhu ukugunyazwa kuze izinsuku ezingu-40 ngemva uMnyango Wezifiki.
Ikheli Centre: Ul. Iningi Molchanovka 30/7.
Ukwenza yonkana Asia Centre
Futhi inikeza ukuthi kungenzeka ukugcwalisa yonke imiqulu edingekayo visa ngokusebenzisa isikhungo visa isicelo e-Asia, okuyilona elisebenzayo futhi itholakala ensimini ka eMoscow. Ngokushesha kufanele kuphawulwe ukuthi isikhungo ngokugcwele ogunyaziwe umlingani leHhovisi Ubuzwe futhi Migration we-United Arab Emirates.
A izivakashi visa kulesi simo kungenziwa kuphela anikezwe kanye kuphela, futhi isikhathi salo izinsuku 29. Kulabo abafuna ukuya United Arab Emirates, kudingeka uhlobo izivakashi zama-visa, futhi indlela enqamulelayo ukungena kuso izinsuku ezingu-60 ngaphandle kokuba nokwenzeka isandiso olwengeziwe.
Ikheli Centre: Ul. Pyatnitskaya, 43, ukwakha 3, ihhovisi 5.
Clearance unqamula enkabeni Sharjah
Lesi sikhungo kuyinto umlingani esemthethweni Air Arabia yenkampani zokuhamba, kodwa Ukukhishwa entry izimvume UAE ke Kwenziwa hhayi kuphela walabo abantu abangabangcwele amaklayenti kwenhlangano. Visa ukuze UAE usebenzisa Sharjah ukumelwa ikhishwa uma kusetshenziswa isethi ubuncane kwemibhalo, okubandakanya:
ikhophi umbala iphasipoti, ezizobonakala yonke idatha ezidingekayo futhi isiginesha ikhasimende;
ngokugcwele ligcwaliswe elektroniki, etholakala kwi-website esemthethweni yenhlangano;
izithombe ikhasimende umbala ethumba nengemuva elikhanyayo;
ithikithi noma ukubhuka ithikithi zombili izinhlangothi.
Kufanele kuphawulwe ukuthi isikhungo visa eMoscow, United Arab Emirates kusukela Sharjah ukumelwa ivumela izivakashi ukuhamba futhi ukudweba imvume izinyanga ezintathu futhi multivisa 30 no-90 days. Uma wayefisa, uhlele visa esiphuthumayo futhi uma kukhona isizathu esicindezelayo inqubo kungaba kwenziwe phezu usuku olulodwa noma ezimbili.
Ikheli Centre: Ul. Maroseyka, d. 7/8, ka. 206.
Clearance ngokusebenzisa zezindiza
Yizivakashi ezibuka amazwe, bephoqeleka ukuba bahambe Emirates zokuthutha, uma babefisa, kungaba njalo fly to the United Arab Emirates kusukela eMoscow noma imuphi omunye umuzi, bese ngqo endaweni oya kuyo ukukhipha i-visa yokuba sendleleni kufika emahoreni angu-96 kunoma yiliphi sezindiza, kuyilapho akukho mahluko, yiziphi izinsizakalo ezithile inkampani yezokuthutha unquma ukusebenzisa. Kuyaphawuleka ukuthi ukulinda isikhathi yokuxhuma indiza kufanele kube okungenani amahora ayisishiyagalombili, kanye isiqondiso ikusasa ukuba bahluke indawo yakho sokuhamba. Ngaphezu kwalokho, kufanele zibhalise iliphi igumbi ehhotela Emirates, kodwa uvumelekile ukwenza kakade ukufika.
izakhamuzi CIS ungakwazi ukuthola i-visa-inthanethi ngaphandle kokuhlola ukuthenga travel noma ithikithi nenkampani ethile, ngakho-ke kuvunyelwe ukusebenzisa amasevisi kwanoma iyiphi inhlangano ezifudukayo. Futhi, ungase uthande ukusebenzisa, futhi ifomu iphepha, kodwa kufanele kwenziwe ngqo ehhovisi olubhalisiwe omunye emadolobheni amakhulu.
Ngemva kokubhaliswa kuzoba imininingwane eyanele ukuze ugcwalise lemibuzo, bese ukulethe Embassy of the United Arab Emirates iphakheji ogcwele amaphepha adingekayo, okuyilezi:
Photo noma umbala scan eyenziwe izinga ezinhle (akukho ukukhanya akukho kukhanya) nge passport yakho futhi ikhasi nesithombe sakho nolwazi oluqondene nabo. Umkhawulo isinqumo Ifayela 900h1200, okufanele okungenani eyodwa ikhasi mahhala isitembu.
Umbala isithombe esithathwe ku nengemuva elikhanyayo futhi zilondolozwe kuyi jpg format. ifayela Ivunyelwe imvume evela 200h257 400h514 ukuba, kodwa umthamo yayo akufanele idlule 60 KB. Uma imibhalo ifakwa nonke ephepheni, izithombe kungaba 3x4 noma 4x5 cm format.
Ikhophi ifayela, noma eqinisekisa ukuthengwa amathikithi.
iziqinisekiso lwezezimali (isitifiketi yasebhange, isitifiketi omsebenzi noma ama-visa kwamanye amazwe).
igcwaliswe ngokugcwele ifomu lesicelo noma lwemibuzo.
Okulandelayo, uzobona kuphela ukukhokhela isevisi kanye nezimali ezimela. Izivakashi visa kwenziwa izinsuku 4-5, kanti ukuba sendleleni kwenziwa izinsuku 2-3 nje. Isimo ukulungela kwemibhalo ungahlala ngibhekabheka idokhumenti siqu.
Ngakho uma umfakisicelo esifanelana ngokuphelele ngezici okubonwa ngazo visa elikhiphe, zidlule lonke inqubo yokuthola ngeke kube nzima. Kwanele nje ukuletha yonke imibhalo edingekayo ukuze Embassy of the United Arab Emirates noma i-ejenti travel yakho, bese ukulinda isikhathi esithile, kuyilapho izazi uzobe wahlanganyela kokuhlola zonke amaphepha isinqumo mayelana ikhipha imvume yakho.
Konke Grasse (France): izikhangibavakashi, izithombe kanye nokubuyekeza
Indlela ukuqoqa ipotimende phezu kolwandle: lwezinto, amathiphu namasu
Smolensk ezikhangayo nezindawo ezithakazelisayo
Ipaki "Fantasy" (Vladivostok) - indawo engcono ukuhlala eMpumalanga Ekude
Tour opharetha "Intourist": ukubuyekezwa kanye abasebenzi
Landing izindiza - ekupheleni uhambo. amathiphu wazibonela
Ihhovisi ezigqokisa kwabesifazane
Crane "Pioneer" kanye nezici zayo
Philips W536: Izici, izibuyekezo, izithombe, izilungiselelo. Indlela ukuqaqa? Philips W536 akufakwanga: ukulungiswa
Kuyini i-tablet ye-futhi kanjani ukuyisebenzisa?
Isifo Crohn - ukuxilongwa noma umusho?
Asus X550C (laptop): izici kanye nokubuyekeza amakhasimende
Husky inja zohlobo: incazelo ngobunjalo inja abalimi Izibuyekezo
Velsoft - lokho Indwangu? Incazelo kanye nokwakheka velsoft izicubu
Umthetho wokuqondisa njengoba isayensi kanye lodaba. Concept futhi yemithetho zokuphatha
Dzheymi Uolters: amabhayisikobho, indima, Biography
Claydite - i yokwakha esisemqoka
ITire-Velcro - kuyini? Winter amathayi: izikopelo noma Velcro?